EXTON, Pa. - Matshi 24, 2022 - Bentley Systems, Incorporated, (Nasdaq: BSY), inkampani yesoftware yobunjineli, namhlanje ibhengeze iBentley Education Digital Twin Design Challenge, ukhuphiswano lwabafundi olubonelela ...
Ukubhaliswa ngoku kuvuleleke kwi-INFRAWEEK yaseBrazil 2021, inkomfa ye-Bentley Systems 'eya kuba nentsebenziswano yobuchule kunye neMicrosoft kunye neenkokheli zoshishino. Umxholo walo nyaka uya kuba "Njani ukusetyenziswa kwamawele edijithali kunye neenkqubo ...
Yonke into esingqongileyo iba yedijithali. Itekhnoloji ephucukileyo efana nobukrelekrele bokwenziwa kunye ne-Intanethi yeZinto (IoT) ziya zisiba yinxalenye ebalulekileyo kwishishini ngalinye, ukwenza iinkqubo…
I-Bentley Systems ibhengeze iiprojekthi zokugqibela zokuwonga ngeyona ndlela igqwesileyo ekusetyenzisweni kwezisombululo zesoftware kulawulo lweziseko zophuhliso. Kukho abagqwesileyo abangama-57, abasuka kuma-420 abonyuliweyo kwihlabathi liphela kulo msitho we…
I-Microstation kuHlelo lwayo lwe-CONNECT, ekuhlaziyweni kwayo i-7 isebenze ithuba lokusebenzisa imephu ye-Bing njengoluhlu lwenkonzo yomfanekiso. Nangona ibisele inokwenzeka ngaphambili, ithathe isitshixo sohlaziyo kwiMicrosoft Bing;…
IRejista kunye neCadastre kumxholo weNkqubo yoTshintsho kaZwelonke
Yonke imihla, amazwe agxininisa kwiindlela zorhulumente we-elektroniki, apho iinkqubo zenziwe lula ekufuneni ukubonelela ngenkonzo engcono kubemi, kunye nokunciphisa imida yorhwaphilizo okanye i-bureaucracy engadingekile. Ngaba...
Ukukhutshwa kwesatifikethi sepropati ngexesha elifanelekileyo kubalulekile ekuboneleleni ngeenkonzo kwiindawo zeCadastre, zinokulungiswa ngaphandle komgudu omkhulu, ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle kunye nokunciphisa iimpazamo zabantu. Kwimihla yakudala, xa sasisebenza ne…
Kule veki iphelileyo iNkomfa yeZiseko zoPhuhliso yowama-2014 ibibanjwe, kwakhona eLondon, nalapho umsitho wokuwonga owaziwa ngokuba yiBe Inspired nawo ububanjwe. Umsitho ubulungelelaniswe ngakumbi kunezinye izihlandlo,…
Uzinzo lwendawo yokuba iinkampani ezibonelela ngezixhobo zeGeo-engineering ziye zalala ekuyilweni kwazo ngokutsha kunye nokuqhelana nezinto ezintsha zobuchwepheshe. Ukuma kuphawuleka kakhulu, ngendlela unxibelelwano lwabo lweshishini oluthengisa ngayo…
Bentley ProjectWise, into yokuqala ufuna ukwazi
Imveliso eyaziwa kakhulu ye-Bentley yi-Microstation, kunye neenguqulelo zayo ezithe nkqo kumasebe ahlukeneyo e-geo-engineering egxininise kuyilo lobunjineli boluntu kunye noshishino, ulwakhiwo kunye nokuthutha. IProjectWise yimveliso yesibini yeBentley ukudibanisa...
I-Blogsy sisixhobo esimangalisayo, ukuza kuthi ga ngoku sesona silungileyo sokubhala kwi-iPad. Njengomboniso, ndizimisele ukuhlaziya eli nqaku kanye njengoko amabhaso enikezelwa. Ndingathanda ukulandela iindwendwe zihlala noWoopra, kodwa yakhe…